LC Technology unikeza izinsizakalo yokutakula idatha zonke izinhlobo Digital Media, kuhlanganise hard drive alulame idatha. Njengomunye woFakazi e-United States’ yezinkampani ezinkulu amasevisi flash inkumbulo alulame idatha, LC Ubuchwepheshe inikeza isevisi ekhethekile wonke umuntu kusuka imfundamakhwela kuya professional. Izinsiza zethu yokutakula idatha Clearwater ungalulama iyiphi futhi zonke izinhlobo idatha. Uke ngephutha ususiwe amafayela idatha, izithombe, amavidyo noma amafayela alalelwayo kusuka imidiya yakho, ihlelwe noma wakhipha abezindaba ngesikhathi inqubo bhala? Izinsiza zethu yokutakula idatha ungalulama amafayela akho futhi uthole idatha yakho emuva.
Clearwater Zethu, Florida yokutakula idatha labs kukhona ezindaweni bephephile yonke idatha ikhasimende igcinwa iyimfihlo. Elawulwa ukufinyelela laboratory kusho kuphela Ochwepheshe ezifanele ukuphatha ulwazi olubucayi. Sihlale izinkontileka ukuze alulame idatha bahlukanisa ngoba uhulumeni, abomthetho nezinhlangano ezizimele. LC Technology ojwayele ezingeni ubumfihlo nesivikelo oluthathwa izinto ezidinga. Wonke amadokhumenti walulama esula unaphakade ngemuva 30 izinsuku.
Ngaphambi kokuthumela abezindaba yakho ukutakula, sicela ushayele ukukhuluma nomunye abameleli bethu:
• Toll-Mahhala e-US: 1-866-603-2195
• Ngaphandle kwe-US: 1-727-449-0891
• Ngo-Europe, Shayela: +44 (0)115 704 3306
Intengo yethu flat-Imali amasevisi flash abezindaba yokutakula idatha kuhlanganisa yokutakula idatha yakho ku-CD noma i-DVD (noma idrayivu ye-USB ukuze nje ngaphezulu kancane) bese ubuyela lokuthumela. Ukuze recoveries ezingaphandle kwe-US, imali lokuthumela ezengeziwe yengezwe. Ayikho icala ngaphandle yokubuyisela ukuthunyelwa uma asiyitholi amafayela akho!
Isevisi yokutakula ku-2GB for Digital Media – $125
Ukukhokhisa yezindaba obonakele ngokomzimba (okuyi. isixhumi aphulwa, njll) – $100
Isevisi yokutakula i Digital Media 4GB – $150
Isevisi yokutakula i Digital Media 8GB – $175
Isevisi yokutakula i Digital Media 16GB – $225
Isevisi yokutakula i Digital Media 32GB – $275
Isevisi yokutakula i Digital Media 64GB – $325
Isevisi yokutakula i Digital Media 128GB – $375
Isevisi yokutakula i Digital Media 256GB nangaphezulu – $425
Isevisi yokutakula i Digital Media 512GB nangaphezulu – $475
Isevisi yokutakula i Digital Media 1TB nangaphezulu – $525
Thumela kuphelile Ifomu yokutakula kanye nabezindaba kuleli kheli elingezansi.
LC Technology unikeza izinsizakalo yokutakula idatha zonke izinhlobo SanDisk® zasemoyeni. Le sevisi itholakala kuwo wonke SanDisk® zasemoyeni ngesilinganiso flat esekelwe umthamo isitoreji abezindaba. Intengo yethu flat-Imali ukutakula flash media kuhlanganisa yokutakula idatha yakho ku-CD noma i-DVD (noma idrayivu ye-USB ukuze nje ngaphezulu kancane) bese ubuyela lokuthumela. Ukuze recoveries ezingaphandle kwe-US, imali lokuthumela ezengeziwe yengezwe. Ayikho icala ngaphandle yokubuyisela ukuthunyelwa uma asiyitholi amafayela akho!
SanDisk® Digital Media yokutakula ku-2GB – $125
SanDisk® Digital Media yokutakula 4GB – $150
SanDisk® Digital Media yokutakula 8GB – $175
SanDisk® Digital Media yokutakula 16GB – $225
SanDisk® Digital Media yokutakula 32GB – $275
SanDisk® Digital Media yokutakula 64GB – $325
SanDisk® Digital Media yokutakula 128GB – $375
SanDisk® Digital Media yokutakula 256GB nangaphezulu – $425
SanDisk® Digital Media yokutakula 512GB nangaphezulu – $475
SanDisk® Digital Media yokutakula 1TB nangaphezulu – $525
Uma unanoma yimiphi imibuzo mayelana zasemoyeni amasevisi wethu yokutakula, please call us Toll Free in the US at (866) 603-2195 noma (727) 449-0891 ngaphandle kwe-US ukukhuluma nge ummeleli kwamakhasimende. EYurophu nase-Australia izivakashi sicela uvakashele amasevisi yokutakula LC Tech UK.
Sicela ngomkhumbi imidiya yakho ekhelini elilandelayo (lolu lwazi futhi efakwe ohlwini kwifomu yokutakula):
Ucingo: (727) 449-0891
Qiniseka ukuthi iphakethe imidiya yakho endaweni zemeyila eziqinile, uyiphawulele equkethe Zobuchwepheshe – awuvezi ukuba kazibuthe. Khona-ke, ulithumele nge USPS, UPS, FedEx, Airborne noma iyiphi indlela lokuthumela evumela iphakethe ukulandelelwa. Sicela uqiniseke ikhadi ivikeleke futhi ikheli liqondile. LC Technology International, Inc. akuyena obangela amakhadi elahleka noma kabana lokuthumela.
LC Technology unikeza hard drive amasevisi yokutakula idatha kulabo izikhathi lapho yokutakula kuyadingeka ngale khono umsebenzisi. Lokhu kungaba ukutakula forensic, yokutakula idatha noma ukulimala idrayivu kanzima. Amanani zisekelwe flat Imali ukuhlaziya drive kanye nesikhathi abasichitha phezu yokutakula.
Ngenxa ngokunemba ubunjalo hard drive, kanye uhlobo ezahlukene nezindaba ngokuvamile ihlangabezane, yokutakula zamanani ngeke ifane kuye ngohlobo umonakalo kutholakele phakathi kokuhlaziywa yethu kokuqala. Imali ebhadelwako engezelelweko ngoba raid afanayo nama-hard drive ukuthi Kuye kwavulwa.
elinengqondo / Ifayela System Umonakalo: Njengoba ongaphakeme njengoba $750
Physical / Umonakalo Uphiko: Njengoba ongaphakeme njengoba $1500
QAPHELA: Kukhona engeke ibuye ekhokhelwa flat intengo $100 drive for nokuhlola yokutakula drive ngayinye. Uma ukhetha ukuya phambili ne yokutakula, ukuthi imali isetshenziswa izindleko yokutakula.
Ukuqalisa kulula – uthole idatha yakho emuva!
Download ifomu lethu lokuthumela hard drive, uligcwalise, Ngena ngemvume, futhi zihlanganisa ne drive yakho uma ngomkhumbi yona.
Chofoza lapha ukuze ulande ifomu lokuthumela hard drive
Iphakheji idrayivu ngokucophelela ukuze bagweme umonakalo okuthumela umkhumbi oya ekhelini lethu ebhalwe ngenhla ngokusekelwe eBhayibhelini.
Iphakheji idrayivu ngokuhambisana izincomo yomenzi ukuthumela hard drive. Phawula iphakethe njengoba equkethe Zobuchwepheshe – awuvezi ukuba kazibuthe. Thumela ngokuhlela USPS, UPS, FedEx, Airborne noma iyiphi indlela lokuthumela evumela iphakethe ukulandelelwa. Sicela ukuthathelwa umshuwalense idrayivu futhi double hlola ekhuluma. LC Technology International, Inc. akuyena obangela amaphakheji ukuthi elahleka noma kabana lokuthumela.
Uma ufisa ukukhokhela imali kokuhlaziywa kusengaphambili nge-credit card, sicela uchofoze add inkinobho inqola ngezansi:
Hard Drive Isevisi yokutakula Ukuhlolwa Imali – $100
behumusha nemibandela ingasebenza.
If you have any questions regarding our hard drive recovery services, please call us Toll Free in the US at (866) 603-2195 noma (727) 449-0891 ngaphandle U.S. ukukhuluma nge ummeleli kwamakhasimende. EYurophu nase-Australia izivakashi sicela uvakashele amasevisi yokutakula LC Tech UK.